मेरी बास्सैका बान्द्रेको टर्की फर्म महिनामा कमाउछन् लाखौ – सबैलाई दिए यस्तो संदेश(भिडियो सहित) – Ap Nepal
मेरी बास्सैका बान्द्रेको टर्की फर्म महिनामा कमाउछन् लाखौ – सबैलाई दिए यस्तो संदेश(भिडियो सहित)
काठमाण्डौ । गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखानलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले साबित गरिदिएका छन् । बान्द्रेलाई नचिन्ने सायदै होलान् । उनै हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्यावसाय गरिरहेका छन् । उनले यो व्यावसायमा करोडौंको लगानी लगाएका छन् ।
उनको फर्ममा १० हजार बट्टै रहेका छन् । सुरजको भनाई अनुसार एउटा बट्टै २ सयदेखि ३ सयसम्मको हुन्छ भने उक्त बट्टैलाई १ सय ३० रुपैयामा बिक्रि हुने गर्दछ । यो हिसाब अनुसार सुरजको फर्ममा १३ लाख बराबरको बट्टै मात्रै रहेको छ ।
यति मात्रै नभई सुरजको फर्ममा बट्टैको अण्डा पनि बिक्रि हुने गर्छ । उनको फर्ममा बट्टैले दैनिक ८ हजार सम्मको अण्डा पार्ने गरेको उनी बताउँछन् । सुरजले बट्टैको एउटा अण्डालाई १० रुपैयामा बिक्रि गर्ने गरेका छन् ।
यस हिसाबमा सुरजले बट्टैको अण्डाबाट दैनिक ८० हजार कमाउने गरेका छन् । यसरी अण्डाको मात्रै हिसाब गर्दा सुरजले महिनामा झण्डौ २४ लाख कमाउने रहेछन् । जति लगानी त्योभन्दा दोब्बर आम्दानी गर्ने सुरज आफ्नै व्यावसायमा व्यस्त मस्त छन् ।
त्यसैगरी उनको फर्ममा ५ सय भन्दा बढी टर्की रहेको छ । एउट टर्की १० देखि १२ किलोभन्दा बढीको हुँदो रहेछ । एउटा टर्की बेच्दा १२ देखि १४ हजारसम्म पर्ने रहेछ ।
सुरजको भनाई अनुसार उनको फर्ममा ६५ देखि ७० लाख बराबरको टर्की मात्रै रहेछ । यसका साथै सुरज अर्थात बान्द्रेले केही कुखुरा पनि पालेका छन् ।
पुर्ण रुपमा बट्टै तथा टर्की व्यावसायी बनेका सुरजले ती प्रजातिकालागी व्यवस्थित खोरको व्यवस्था गरेर यतिबेला आफ्नै व्यावसायमा ब्यस्त देखिन्छन् । फर्म खोल्ने योजना कसरी दिमागमा आयो ? अहिले व्यावसाय कस्तो भईरहेको छ भन्ने विषयमा सुरज भन्छन् :
Prevसबैको मनमा बस्न सफल ”सालको पात” लोकदोहोरीले राख्यो रेकर्ड । करोडले हेरे, कस्तो छ गित ! (भिडियो सहित)
Nextजब इन्डियन आइडल यी युवाको गीत सुरूभो सबै कोचले एकसा झारे आशुका धारा (भिडियो सहित)
सुस्मिताकी आमा अमृताको घर पुग्दा चल्यो रुवाबासी- भन्छिन् आज यति सानो बच्चा आमाको लागी रोडमा छ (हेर्नु`स भिडियो)
लामो समय पछि अशोक दर्जी घरमा , परीवारलाई गित सुनाएर गरे रमाइलो , अचानक सबै भए भा, बुक (भिडियो सहित)
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल पुस १० गते शनिबार इश्वी सन २०२१ डिसेम्बर २५ तारीख